Sidee ayuu udhacay qaraxii maanta lagu dilay sargaalka katirsan Alpha Group ee kadhacay Muqdisho. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Sidee ayuu udhacay qaraxii maanta lagu dilay sargaalka katirsan Alpha Group ee kadhacay Muqdisho.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax Barqanimadii Maanta duleedka Magaalada Muqdisho lagula eegtay Saraakiil la sheegay inay ka tirsan yihiin Ciidanka Alpha Group ee dowladda Soomaaliya.
Qaraxaasi oo ahaa miino la geliyay laamiga dhinaciisa ayaa waxaa lala eegtay gaari Cabdi Bile ah oo la socdeen Saraakiil ka tirsan Ciidanka Alpha Group ee dowlada xili ay socdaal ku marayeen deegaanka Jaziira ee duleedka Muqdisho.
Sidoo kale waxaa la sheegay in uu burburay gaarigii ay la socdeen Ciidamada,kuwaasi oo ka yimid deegaanka Lambar50 ee Gobolka Shabeellaha Hoose,iyagoona kusoo jeeday dhanka Magaalada Muqdisho,hayeeshee uu qarax ku qabsaday Jaziira.
War qoraal ah oo lagu daabacay baraha Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay ku sheegteen Mas’uuliyada qaraxas,iyagoona sheegay inay ku dileen Saraakiil lagu magacaabo Faarax Caato, Daahir Cabdulle iyo Sharmaarke.
Dhinaca kale weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda Soomaaliya oo ay hadlayaan wararka sheegaya in qaraxa ka dhacay deegaanka Jaziira lagu dilay Sarakiil ka tirsan Ciidanka Ciidanka Alpha Group.
Previous articleDegdeg:- Ahlusunna oo weji cusub lasoo baxday ‘Guddiga Farsamada halkaan kama shaqayn karaan wan udigaynaa”.
Next articleDAAWO:- Golaha Guurtida Somaliland oo maanta gacanta iskula tagay ‘Hoolka oo isku badalay goob ciyaal suuq”.